Home Wararka Itoobiya oo ku amartay DFS inay u hambalyeyso mashruuca balaarinta dekedda Berbera
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa in mudo ah ka soo horjeeday heshiiska dhismaha Dekada Berbera kaas oo u dhaxeeyay sadax qaybood: Itoobiya, Somaliland iyo Shirkada DP World. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saaray kaas oo lagu didan yahay fulinta heshiiskaas.
Waxa dalka lagu qabtay mudahaaraadyo ay soo abaabushay Dopwlada Federaalka Soomaaliya kuwaas oo looga soo horjeedo heshiiskaas. Dowlada Itoobiya ayaa fartiin ay soo gaarsiisay MW Farmaajo waxa lagu amray in DFS u hambalyeyso Mashruuca Balaarinta Dekada Berbera. Inkasta uu Farmaajo si toos ah ugu hambalyeeyay doorka dowlada Itoobiya ee mashruuca, hadana waxa uu ka gaabsaday in fartiintaas lala wadaago shacabka Soomaaliyeed.
Si hadaba loogu muujiyo taageero mashruucaan ayaa waxa uu Farmaajo amray in warbaahinta dowlada federalka lagu amaano mashruucaas, shacabka Soomaaliyeed loo tuso in dowlada Federaalka ay raali ka tahay taabagalinta mashruucaas.
Walaaka wararka SONNA oo fulinaysa amarka dalka Itoobiya ayaa soo qortaysidan: Madaxweynaha Somaliland Mudane Muse Bihi Abdi ayaa si rasmi ah Xadhiga uga Jaray Mashruuca Balaadhinta Dekedda Berbera iyo Mashaariic kale oo laga hirgaliyey Marsada Berbera. Waxaa Munaasibadaas ka qayb galay Wufuud sare oo ka socotay Waddamada Itoobiya, Kenya, Dublamaasiyiin iyo Madax kale.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo Khudbad ka jeediyey xadhig ka jarka Mashaariicdaas ayaa sheegay in Dekedda Berbera ay maanta la jaanqaadayso Dekedaha waaweyn ee adduunka Wuxuu Madaxweynuhu u mahadceliyey Shirkadda DP World ee gacanta ku haysa Dekedda Berbera”